Gwara mmanụ Idupu njikọ ZOP-57, na-akpọ IPC, e bu n'uche ka alaka ụlọ ọrụ ahụ gwara mmanụ ọrụ eletriki akara site isi eletriki akara, na-enweghị ịcha jaket nke isi USB.
1. Nke a ụdị Mkpuchi Idupu mwekota dị nnọọ inogide na mfe n'ihi na echichi.
2. Area ojiji nke bụ nnọọ mbara, ukwuu n'ime efe n'elu bundled eduzi edoghi, n'okporo ámá àmụmà na ụlọ.
3. Ọ dịghị silicone mmanu mkpa
4. Big nso nke nha nke na-eduzi ya na etinyere ya.
5. Ihe nke na-eduzi: aluminum ma ọ bụ ọla kọpa
6. Easy echichi, site hex akwado na ala n'akụkụ nke IPC
7. Mere nke UV eguzogide polima, igwe anaghị agba nchara ngwaike, aluminum shearhead nut.
All mgbakọ gafere tensile ule, ọrụ ahụmahụ na okpomọkụ sitere na site - 30 ° C ruo +50 ° C ule, dielectrical voltaji ule na mmiri, okpomọkụ ịgba ígwè ule, merela agadi ule, corrosion eguzogide ule wdg
Waterproofed ABC mkpuchi Idupu njikọ nwere ike arụnyere na LV ABC Gịnị na gwara mmanụ na-anọpụ iche ozi waya na-akwado onwe 4 cores cable usoro. Applied efefe, ZOP-57 nwere ike gwara mmanụ na Low voltaji cable mere nke aluminum ma ọ bụ ọla kọpa ihe onwunwe. Low voltaji cable njikọ ZOP-57 nwere ike ga-eji na cable edoghi ruo 1000Vac (1000 V).
Low voltaji njikọ ZOP-57 nwere ike ọnọ ma iche iche ma ọ bụ ọnụ dị ka nzukọ na ndị ọzọ dị mkpa Low voltaji cable oyiyi akwa, arịlịka clamps, nkwusioru clamps, LV brackets, nko ndị na-na Jera LV ABC oyiyi akwa ngwaahịa nso. Ndị ọzọ na-efefe n'elu cable oyiyi akwa ngwa anya na-adị mfe na-bulie dị ka n'ibu-eguzogide ma na dayameta nke cables 'waya nke ozi. Anchoring clamps nwere ike arụnyere na nwụrụ anwụ-ọgwụgwụ, abụọ nwụrụ anwụ-agwụcha cable ụzọ gasị. Service clamps imewe na-enye ohere idi a zuru ezu ibu enweghị cable ileghara.
Previous: Mkpuchi ịkpọpu njikọ, ZOP-54 (6-50 / 16-150)
Osote: Insulation Piercing Clamp, ZOPN-95
cable efefe Idupu
cable Idupu clamps
sọrọ tap njikọ
mfe tap njikọ
gwara mmanụ clamps
gwara mmanụ njikọta
gwara mmanụ ọtụtụ njikọ
Gwara mmanụ ịkpọpu njikọ maka Germanys
Gwara mmanụ ịkpọpu Njikọta Export na Romania
Gwara mmanụ ịkpọpu Njikọta na Portugal
Gwara mmanụ ịkpọpu Njikọta N'ogbe na US
gwara mmanụ tap njikọta
ala voltaji njikọ ZOP-57
plastic ulo oru Idupu
Sliw 57 analọg
OHL erughị ala mwekota, STC